दुई पत्रकारको ‘बार्गेनिङ’ अडियो बाहिरियो ! « Khoj Raftar
दुई पत्रकारको ‘बार्गेनिङ’ अडियो बाहिरियो !
८ मंसिर । कैलालीका दुई पत्रकारले आर्थिक ‘बार्गेनिङ’ र ठगी गरेका घट्नाहरु बहिरीएका छन् । नाईस टेलिभिजनका सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिमेश बिक र नाईस टेलिभिजनमै आबद्ध गोविन्द विसीले कैलालीका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ‘डर’ देखाएर आर्थिक बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ ।
उनीहरुले समाचार प्रकाशन गरिदिने भन्दै धम्काउने, पैसा नभएको चेक दिने, उधारो खाएर भाग्ने, विभिन्न बाहना बनाएर ठगी गर्ने जस्ता घटनाहरु बाहिरिएका हुन् ।
केही समय आर्थिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकार बिक यस्तै ‘बार्गेनिङ’ का घट्नाहरु बहिरिएपछि निष्कासनमा परेका थिए । यतिबेला भने आर्थिक ‘बार्गेनिङ’ र ठगी गरेका घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएपछि समग्र पत्रकारिता जगतनै बद्नामित भएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरुले पत्रकार बिकलाई कारबाहीको माग गर्दै सामाजिक सञ्जाल रंगाएका छन् । पत्रकारहरुले सञ्चारकर्मीकै ग्रुप च्याटमा बिकको आलोचना गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई बहिस्कार गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । पत्रकारकाले गरेका ‘बार्गेनिङ’ र ठगी गरेका घटना बाहिरिएपछि राज्यको चौथो अंग लज्जित बन्नु परेको धनगढीका पत्रकारहरुको भनाइ छ ।
हिमेश बिक र गोबिन्द बिसीले कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ स्थित श्री वास्तव मेडिकल हलका सञ्चालकबाट एक लाख असुल्न पटक–पटक धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । उनीहरुले मेडिकल सञ्चालक कमलेश सक्सेनाकी श्रीमती लिला सुनारलाई डर देखाई धम्काएर २५ हजार असुल गरेको र थप ७५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै टेलिफोनमा ‘बार्गेनिङ’ गरेको घटना बाहिरिएको हो ।
बिक र बिसीले सुरुमा दुई लाखमा ‘बार्गेनिङ’ गरेको र पछि एक लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै मेडिकल सञ्चालकलाई धम्की दिएको सञ्चालक कमलेश सक्सेनाले बताए । उनले भने–‘श्रीमती लिलाबाट तपाईलाई आवश्यक समस्या परे सहयोग गर्ने भन्दै रकम असुल गरे, थप पैसा माग्न अझै पटक–पटक तनाव गरिरहेका छन् ।’
अत्तरियाका एक व्यापारीसंग फर्निचर लिएर हिमेश बिकले पैसा नभएको चेक दिएको अर्को घट्ना बाहिरिएको छ । उनले दिएको चेकमा पैसा नभएको र त्यसपछि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
बिकले सानिमा बैकंको चेक दिएको भएपनि अहिलेसम्म पैसा नपाएको फर्निचरका सञ्चालकले गुनासो गरेका छन् ।
हिमेश बिकले कैलालीका दुई जना उप–मेयरलाई टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता गराउने भन्दै काठमाडौं लगेर होटलमा राखी पैसा नतिरेरै भागेको घटना सार्वजनिक भएको छ । ती उप–मेयरहरुलाई काठमाडौंमा घुमाउन उनले आठ दिनसम्म प्रयोग गरेको ट्याक्सी भाडा समेत नतिरेको खुल्नमा आएको छ ।
विकले दैनिक पाँच हजारको दरले ट्याक्सी चढेको चालक गोकर्णप्रसाद घिमरेले आइतबारको सिधाकुरा जनता कार्यक्रममा आएर गुनासो गरेका थिए । उनले आठ दिनको ४० हजार र २१ हजार नगद ट्याक्सी चालकसंग सापटी लिएको रकम लिएर लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन बनेको भन्दै उनले कार्यक्रमै गुनासो गरेका थिए ।
हिमेश बिकले धनगढीका स्टेशनरी सञ्चालक तथा पत्रकार डिल्ली ओझाको २० हजार बढी रकम लामो समयसम्म नदिएपछि उनका बुवाबाट आधा रकम असुल गरेपनि बाँकी रकम दुई वर्षदेखि नदिएको ओझाले बताए ।
बिक र बिसीले कैलालीलगायत विभिन्न ठाउँमा पत्रकारको परिचय दिएर ठगी र ‘बार्गेनिङ’ गर्ने सञ्जाल बनाएका छन् । उनीहरुले रकम नभएको चेक दिने, उधारो खाने, समाचार प्रकाशन गरिदिनेभन्दै रकम बार्गेनिङ गर्ने, विभिन्न बाहना बनाएर ठगी गरेर हिड्दै गरेका घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै गएका छन् ।
यी घटनाहरुको बिषयमा पत्रकार बिकले भने खण्डन गरेका छन् । उनले आरोप प्रमाणीत भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताए ।
काठमाण्डाैमा आजदेखि भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइँदै
दाङमा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई गफगाफ गर्न दिवा सेवा
राष्ट्रपतिद्वारा बागमती प्रदेश प्रमुखमा शर्मा नियुक्त
मुख्यमन्त्री पौडेलले दिए राजीनामा, अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने